Cinderella and Four Knights ( 2016 ) - မြန်​မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel August 15, 2016
ဒီဇာတ်​ကား​လေးက​တော့ မထွက်​မှာပဲ hot ဖြစ်​​နေတဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးပါ .. မင်းသား​ချော ​လေး​ယောက်​ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး မိန်းက​လေး​တွေ ပါးစပ်​ဖျားမှာ ​ရေပန်းစား​နေတဲ့ series အသစ်​​လေးတစ်​ခုဆိုလဲ မမှား​လောက်​ပါဘူး​နော်​ ....
ယခုဇာတ်​ကား​လေးကို Main Actor ​တွေအ​နေနဲ့က​တော့ 49Days , The Return of Iljimae ( မြန်​မာပရိသတ်​​တွေက​တော့ အီဂျီမဲ လို့ သိထား ) အစရှိသည့်​ ဇာတ်​ကား​တွေမှာ နာမည်​ကြီး ​ကျော်​ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသား​ချော​လေး Jung Il-woo , Blood ဆိုတဲ့ series ​လေးမှာ လူသိများလာကြတဲ့ မင်းသား​ချော​လေး Ahn Jae-hyeon , ​တောင်​ကိုရီးယား နိုင်​ငံရဲ့ နာမည်​ကြီး K Pop Band တစ်​ခုဖြစ်​တဲ CN Blue Band မှ အဆို​တော်​​လေး Lee Jung-shin တို့ အဓိကပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ထားပြီး Main Actress အ​နေနဲ့က​တော့ မင်းသမီး​ချော​လေး Park So-dam တို့က ပါဝင်​အားဖြည့်​ထားပါတယ်​ ...
ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းအရ - ဇာတ်​လမ်းနာမည်းတိုင်း စင်​ဒရဲလား ​လေး​ပေါ့ ... ဒါ​ပေမဲ့ အားလုံသိထားဖူးတဲ့ စင်​ဒရဲလား လိုမဟုတ်​ပဲ ​ခေတ်​သစ်​ စင်​ဒရဲလား ​လေး​ပေါ့​နော်​ ... ​ခေတ်​သစ်​ စင်​ဒရဲလား​လေးမှာ​တော့ မိ​ထွေးနဲ့ သူ့မိ​ထွေးရဲ့ သမီး​လေး ရှိတယ်​ဗျ ... သူတို့​တွေနဲ့ တူတူ​နေရပြီး ​သေဆုံးသွားတဲ့ မိခင်​ရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်​သည့်​ ​ကောလိပ်​​ကျောင်းသူတစ်​​ယောက်​ ဖြစ်​​အောင်​ ဘဝကို တကိုယ်​တည်း ကြိုးစားရုန်းကန်​​နေရတဲ့ စင်​ဒရဲလား​လေး အွန်​ဟာဝန်​ ( Park So-dam ) ... ​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ ဒိတ်​ဒိတ်​ကြဲ သူ​ဌေးကြီးတစ်​ဦးရဲ့ ​တစ်​စက်​မှ မတည့်​ကြတဲ့မြေးသုံး​ယောက်​ ...
ညီအစ်​ကိုထဲမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ရည်းစားအရှုပ်​ဆုံး ကန်​ဟွန်​မင်း ( Ah Jae-hyeon ) ၊ ကန်​ဟွန်​မင်းနဲ့မတည့်​တဲ့သနားစရာဂျစ်​ကန်​ကန်​​လူဆိုး​လေး ကန်​ဂျီဝန်း ( Jung Il-woo ) ၊ သီချင်းဆိုပီး​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြား​နေတဲ့စတား ကန်​ဆိုးဝူး ( Lee Jung-shin ) ၊​ သူ​ဋ္ဌေးကြီးရဲ့သစ္စာရှိလူယုံ စတဲ့ မင်းသား​ချော​လေးပါး နဲ့ စင်​ဒရဲလား​လေးတို့​တွေ့ကြတဲ့အခါဘာ​တွေဆက်​ဖြစ်​မလဲ ? ဘယ်​လို ရီစရာ ​မောစရာ​တွေနဲ့ ကြုံမလဲဆိုတာကို​တော့ ဒီ '' Cindrella and Four Knights '' ဆိုတဲ့ Series ​လေးကို ကြည့်​ရှုပြီးခံစားကြပါဦး​နော်​ ...
​တောင်​ကိုရီးယားနိုင်​ငံရဲ့ TVN Channel မှ ထုတ်​လွှင့်​​နေဆဲ series တစ်​ခုလဲဖြစ်​ပါတယ်​ .. သူတို့ဆီက Update တိုင်း ရက်​သိပ်​မကွာပဲ myanmar sub နဲ့ တင်​​ပေးသွားမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​ ...
Rating အ​နေနဲ့က​တော့ viki မှာ 8.7/10 ​တောင်​ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးပါ ... ကဲ ကြည့်​ရှုခံစားလိုက်​ကြပါဦး​နော်​ ....
Country. : South Korea
Genre. : Romance , Comedy
Translator : Khin July Moe / Pink Panther / ChuLai
Nilar Win August 16, 2016 at 1:26 AM
Full house (thailand) ဇတ်ကားလေးတင်ပေးပါလားဟင်
ခင်ဘုန်းကြွယ် August 16, 2016 at 8:33 PM
အပိုင်း2 လေးတင်ပေးပါအုံး kdramasub မှာ လေးပိုင်းတောင်ရှိနေပီ...
thaw August 18, 2016 at 2:34 AM
အပိုင်း ၂ လေးထပ်တင်ပေးပါဦးဗျို့
kaung linn tun August 19, 2016 at 11:40 PM
ရိုးရိုး​လေးပဲ ဆက်​ချစ်​ကြမယ်​ August 20, 2016 at 6:19 PM
Htetaung Hlaing August 22, 2016 at 1:41 AM
Htetaung Hlaing August 22, 2016 at 11:59 PM
khinsandahtun maythu August 23, 2016 at 1:09 AM
Moonlight Drawn by Clouds ကားလေးတင်ပေးရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲနော် :D
KOHan Phyo Aung August 23, 2016 at 3:21 AM
5 bal top lout kyi ya mar Lal
bomebome August 24, 2016 at 3:51 AM
Ahtoi Zinghtung August 27, 2016 at 11:17 PM
Ahtoi Zinghtung August 27, 2016 at 11:18 PM
ရိုးရိုး​လေးပဲ ဆက်​ချစ်​ကြမယ်​ August 28, 2016 at 2:57 AM
Baeki Army V August 28, 2016 at 9:35 AM
Ep5quickly please
And Uncontrollably Fond also
koHeinzaw htoo August 28, 2016 at 10:01 PM
ရိုးရိုး​လေးပဲ ဆက်​ချစ်​ကြမယ်​ August 28, 2016 at 10:55 PM
may madi August 29, 2016 at 9:36 AM
i very like .thank u so much
soewin oo August 30, 2016 at 10:39 PM
စင်ဒရယ်လာ ဒုန်းဒုန်းဒုန်း မြန်မြန်မြန်မြန်တင်ပေးပါ ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ
phyo phyo August 31, 2016 at 7:15 AM
Louisa September 2, 2016 at 1:18 AM
I'm havingahard time downloading with pcloud. My device does not works properly. I'd really appreciate if you upload with media fire. It's okay, if you can't. Just notify me if you can't but I'll be glad if you help me. Thank you so much, admin. Keep up with your good work. I'll always support you.
Rai Rai Lay September 2, 2016 at 9:22 PM
Rai Rai Lay September 2, 2016 at 9:23 PM
Htetaung Hlaing September 4, 2016 at 9:41 PM
享陈同 September 5, 2016 at 7:22 PM
Rai Rai Lay September 6, 2016 at 12:07 AM
goodboylay September 7, 2016 at 4:54 AM
享陈同 September 8, 2016 at 1:25 AM
Rai Rai Lay September 8, 2016 at 4:43 AM
8 8 8 8888888888
kaung linn tun September 9, 2016 at 2:40 AM
Rai Rai Lay September 10, 2016 at 5:16 AM
Rai Rai Lay September 10, 2016 at 5:17 AM
Min Pii September 13, 2016 at 4:40 PM
အပိုင်း ၉ ​လေးလုပ်​​ပေးပါဦးဗို့ စာ​မေးပွဲကြီးမြန်​မြန်​ပြီးပါ​စေဗျာ
Rai Rai Lay September 15, 2016 at 5:31 AM
11ကဒီနေ့ထွက်မှာနော်910 မလာသေးဘူးလား
Rai Rai Lay September 15, 2016 at 5:39 AM
စတေနာ ရှထေ့ားပွီ အခြိနျကုနျခံ ငှကေုနျခံ လူပငျပနျးပွီ ဇာတျလမျးကောငျးကောငျးလေးနဲ့
ဇာတျကားကောငျးကောငျးလေးတှကေို မွနျမာစာတနျထိုးတှေနေဲ့ တငျပေးနတေဲ့ ( M A ) မှ
အကျမငျမြားအား အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။အခုဒီဇာတျကားလေးကို ကွညျ့ရှုအားပေးနပေါတယျ။
အကျမငျမြားအားလုံး ကိုယျစိတျနှဈဖြာ ကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ။
CCK 0088 September 15, 2016 at 9:43 AM
khinsandahtun maythu September 15, 2016 at 6:15 PM
thaw September 15, 2016 at 8:05 PM
Nay Chi Lynn September 15, 2016 at 10:53 PM
plz upload9& 10
CCK 0088 September 16, 2016 at 9:03 AM
9,10 တင်သေးဘူးလား မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါ
CCK 0088 September 16, 2016 at 9:04 AM
CCK 0088 September 16, 2016 at 9:06 AM
Khun HlaMoe September 17, 2016 at 7:48 PM
Rai Rai Lay September 17, 2016 at 10:50 PM
thi thi September 17, 2016 at 10:52 PM
thu lay September 19, 2016 at 8:17 AM
အပိုင်းတစ်ပိုင်းကြာတယ်နော် မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါနော် စောင့်နေရတာ
အသစ်ရရင် ထပ်တင်ပေးပါဦး please
Thank you so much for your effort. We really appreciate it
Kyawnaing Tun September 28, 2016 at 5:39 AM
Unknown October 1, 2016 at 2:44 AM
12 Lay Tin Pay PAr Ohn Naw Thanks
Kyawnaing Tun October 3, 2016 at 11:34 PM
ကျေးဇူးပါ။ အဆုံးထိဆကြည့်ရဖို့ စောင့်ျှော်နေပါတယ်။ ခုလိုအများအတွက် အပင်ပန်းခံပေးတာ ကျေးဇူးအမျာကြီးတင်ပါတယ်
Princess Yona November 4, 2016 at 8:58 PM
12 နဲ့13 vip link နဲ့မရ ဘူး ဖြစ် နေ တယ် pcloud link နဲ့မရှိ ဘူး လား ပာင်
media arts November 6, 2016 at 9:45 PM
12,13 pcloud လေးနဲ့လုပ်ပေးပါခင်ဗျာ
wanna zaw November 22, 2016 at 7:00 AM
အပိုင်း12,13 pcloud link လေးရှိရင် မစကြပါဦးဗျ